Shiinaha oo sameeyey maxkamad Internet-ka ku shaqaysa - BBC News Somali
Shiinaha oo sameeyey maxkamad Internet-ka ku shaqaysa
Image caption Maxkamadda Internetka
Dowladda Shiinaha ayaa markii ugu horeysey furtay maxkamad qadka internetka ku shaqaysa oo dhagaysata dacwadaha la xiriira internetka sida ay faafisay warbaahinta dowladda Shiinaha.
Maxkamaddan ayaa laga furay magaalada Hangzhou waxana ay jimcihii dhagaysatay dacwaddii ugu horeysay oo u dhaxaysay nin qoraa ah iyo shirkad bog internet leh, iyada oo labada dhinac ee ay dacwadda u dhaxaysay ay kumbuyuutarkooda kala socdeen dhagaysiga dacwadda.
Xaakimiinta ayaa marka hore la dhaarinayaa ka hor furitaanka dacwadda, waxana kaliya ay maxkamadda dhagaysataa dacwadaha xagga rayidka ah sida muranada ka dhasha dukaamadda qadka internetka bedeecooyinka kaga iibiya macaamiisha .
"Internetka waxa uu talaabay xuduudaha muuqda, waxana uu naga caawinayaa in aan waqtiga beekhaamino" ayuu yiri Wang Jianggiao, madaxweyne ku xigeenka maxkamaddana.
Sannadkii 2016-kii ayay dowladda Shiinaha biloowdey in ay qadka ka baahiso dacwadaha ka socda maxkamadaha caadiga ah, balse talaabadaasi waxaa dhaleeceeyey dadka qaar oo sheegay in in dadka aysan dooneynin in arrimahooda gaarka ah ay dadka kale ogaadaan.